Fitohizan'ny hafatra : Ay v i rhajo tao ihany fa tsy niteny e, Efa namba...
RBNIR - 05/10/2016 12:54
Ay v i rhajo tao ihany fa tsy niteny e,
Efa nambarako tamin'i tealala tatsy hoe
Isika dia voafehin'ny atao hoe FAMPIANARANA TSY MISY KILEMA!!!!
rhaj0 - 05/10/2016 16:23
RBNIR Rehefa tsy mamaly anao aho dia :
hi hi hi.. voalazanao ry RBNIR.. Resaka Finoana/Fivavahana no atao eto, resa-Baiboly matetika: "anganoangano" izany, hozy RBNIR. Izaho indray ve hi-contredire anao an'izany, Bravo... bravissimo.
RBNIR 2 tsy natao ho fambara ampahibemaso izay ilay resaka
Ka ilay "anganoangano", nefa ataonao fiki-maty ao moa, ka takatrao ihany izany farany fa dia ridicule/aberrant/... ka dia "tsiambarambara" fa mahamenatseee....
RBNIR voafehin'ny atao hoe FAMPIANARANA TSY MISY KILEMA!!!!
DIa "tsy hamaly" ianao izany, satria "tsisy-kilema" an...
Ka io izany kosa ngo dia tonga @ ilay hadrohadronay fony taloha hoe..
nahoana no TSY miteny ee...
- ngo dia mandevi-tay an-tsalaka
- sa, mandevi-tsalaka any am-bava
endriny - 08/10/2016 18:20
Tena mba tsy miombo-kevitra @ Endriny kosa aho @ ity resaka Fihavanana ity. Izaho mihevitra fa tsy mijanona @ "Velona iray trano, maty iray fasana" ilay firaisa-miaina, fa miitatra @ "Trano Atsimo Sy Avaratra"....
Ka tsy izay ve no nolazaiko hoe misy zohihavana efatra: Iray razana, Iray foko, mpifamaky ra (fati-dra), dia ny fanambadiana. Ireo ihany no zohihavana amin'ny fihavanana
Izay no atao hoe firaisan-kina sy rafi-piarahamonina, fa tsy fihavanana akory. Ny fiaraha-monina rehetra dia misy izay daholo araka ny ivom-paramaritana ara-paritra misy azy. Fa tsy izay no atao hoe fihavanana.
Fa ilay resaka entina anentanana antsika amin'ny politika sy ny finoana ankehitriny hoe Fihavanana, Fihavanam-pirenena sns zavatra tsy mitombina akory fa terena sy alentika anatin'ny sain'ny olona mba hisy fotsiny. Dia I Rhaj0 izao tena nandairany tsara
rhaj0 - 11/10/2016 02:13
endriny Fa ilay resaka entina anentanana antsika amin'ny politika sy ny finoana ankehitriny hoe Fihavanana, Fihavanam-pirenena sns zavatra tsy mitombina akory fa terena sy alentika anatin'ny sain'ny olona mba hisy fotsiny. Dia I Rhaj0 izao tena nandairany tsara
Ny "nandaitra" tamiko kosa k'lou dia ilay hoe "ny raharaham-pirenena TSY ahalalako havana". Tsisy idiriran'ny Fihavanana ny resaka Firenena.
inty misy miezaka manazava ny Fihavanana, ary iombonako hevitra
Dia inty koa manaraka
RABEMANANJARA (2001, p. 27) écrit : « On était solidaire parce qu’on se réclamait de la même lignée. On était solidaire en raison du voisinage et de la proximité, face aux périls et aux nécessités. L’aide mutuelle s’exerçait spontanément dans de nombreux domaines et de nombreuses circonstances. On était ensemble pour le travail des rizières, pour l’entretien des terres des personnes malades ou absentes. On était ensemble pour réparer ou construire les tombeaux. On portait secours aux vieillards, aux infirmes, aux souffrants. En cas de décès, c’était la communauté qui se chargeait de tout. Dans le contrat social, on était les uns pour les autres. » Cette dernière phrase est très forte et elle montre bien l’effacement de l’individu au profit de la collectivité. Ceci est confirmé par RAZAFINDRATOVO (1971, p. 52), selon qui « le lignage avait sa morale sociale, sa justice, normes épousant l’intérêt de la collectivité. Socialement, l’individu doit éviter la perte du baraka, honneur individuel certes mais avant tout collectif, toute infraction personnelle étant susceptible de ternir l’honneur de tous. »
Ce qui frappe les observateurs de la société malgache est la volonté affichée du consensus à tout prix. « Conduites et actes physiques ou de parole obéissent les uns et les autres à l’ethos du fihavanana, un idéal d’harmonie et d’entente sociale qui [...] force les hommes à s’auto-contrôler et à se retenir d’exprimer un désaccord trop marqué » a pu écrire OTTINO (1996, p. 445). Dans ces conditions, « dès lors qu’il est clair qu’une question doit être évoquée publiquement et que les solutions ou mesures qu’elle implique n’ont aucune chance de recueillir l’unanimité et que, pire, elle menace la sauvegarde de cette unanimité et, au-delà, l’idéal du fihavanana, elle peut, quelle que soit sa gravité et son urgence, être écartée, ignorée et renvoyée sine die. » (p. 452)
endriny - 13/10/2016 15:26
Indroa io hevitra io izao nonavoitranao teto, kanefa ianao dia milaza fa niainan'ny Malagasy ary mbola iainany ny fihavanana. Dia gaga aho raha io hevitra eo ambony io no itarafana fa misy tokoa ny fihavanana eto sy teto Madagasikara. Mbola misy ilay hoe: Na amboako na amboan'olona, rehefa vandana dia kary"
Dia averiko indray koa fa sadasada efa hatramin'izay izany fihavanana izany teto Madagasikara, fa filamatra sy tanjona tiana ho tratra fotsiny io. Ny zana'Andriamasinavalona izay namorina ny tendrombohitra 12 aza niady an-trano. Ny tanindrana sy ny Tanivo mbola donkiho tsy hay afenina, ny ambany Tanana sy ry zareo ery ambony ery mbola mifangarika izay tsy izy. Dia mbola averiko indray fa ny fiangonana sy ny mpanjanaka te hampandry ny tany no tena nivohy io fihavanana io mba hampanaiky ny Malagasy andoalika amin'ny frantsay fahizany.
I Flacourt tsy nilaza Fihavanana mihintsy fa ny firaisan-kina sy ny rafi-piaraha-monina no nolazaina tamin'izany andro izany.Fa ry zareo mpikaroka sy te hampandoalika an'i Madagasikara taty aoriana no nilaza izany fihavanana izany.
Tsy izay rehetra lazain'ny vazaha akory dia marina. Raha tsy izany dia tokony hanaiky ny baiboly ihany isika satria io no nolazain'ny vazaha ihany koa.
rhaj0 - 13/10/2016 17:21
Raha hoe misy anivony (niveau) isan-karazany ny fiainana, dia ny Fihavanana
- eo anivon'ny Firenena aloha izany dia TSY MISY an'izany. Miombo-kevitra isika eto.
- eo anivon'ny fianakaviana sy namana, dia ... MISY?? Miiombo-kevitra ve isika eto ??
- eo anivon'ny mpiray vodi-rindrina na ny iray vohitra, dia TSISY an'izany hozy i Endriny?
Rahefa mijery ny olona (na peuple) isan-karazany eto an-tany aloha aho, dia, ny fahatakarako azy, dia ireo izay .... ndao lazaina hoe, any @ "grassroot", izany hoe, TSY elaboré be sahala @ sivilizasiona tandrefana io, ireo peuple any @ grassroot dia misy zavatra iray tsikaritro foana, dia ilay hotry ny ilay avy @ "intuition de survie" angamba, izay tena m(amp)iraikitra akaiky ny samy olona. Ireo sivilizasiona (tandrefana) efa élaboré be mantsy, dia efa tsy "survie" intsony no mahavaky ny lohany, ary dia tsy misy, na tsy ahitako, an'io mifampiraiktra akaiky io.
Rahefa mandinika aho, dia ohatra hoe, mahafinaritra ahy ny miaraka amin-drizareo latino sy latina, amerika atsimo toa ny meksikana h@ arzentiniana, fa tena tonga dia mifampitsimbina ary tena chaleureux ny fiarahana.
Vao androany indray koa izao ohatra, dia nisy mpanao gazety niverina avy any Haiti. Dia hoz'izy : ny ouragan dia nanimba tanteraka ny vohitra sy ny fiainan-drizareo, nefa ireo Haitiana dia mbola mitsiky ihany mandray anao. Fa raha miverina avy any Florida ianao, samy voany ihany na Haiti na Florida, dia TSY hahita an'izany.
Ka ny tiako ahatongavana, dia
1- "misy" something ao ry Endriny. Mety tsy haiko, ary tsy voafaritro mazava, fa misy "something" amintsika olona (peuple) TSY toa ny tandrefana (sy ny Kristianisma-ny).
1bis- aleo averiko sy amafisiko, fa io "something" io dia TSY ao @ ireo tandrefana sy ny Kristianisma-ny.
2- fa miombo-kevitra @ Endriny aho, fa TSY hoe tena original Gasy iliay izy. Tsisy an'izany hoe, tsy manam-paharoa fa gasy ihany ilay "something" ao amintsika izao, fa maro koa ny sivilizasiona manana "something" toa antsika.
Ka iilay "something" gasy io no tondroina hoe ... "Fihavanana"...
endriny - 13/10/2016 20:21
Ny fihavanana arak'ilay teninao teo alohaloha teo ihany dia hoe "Havana". Dia faritana avy amin'izay ny hoe inona ireo fototra ifotoran'ny fihavanana: Iray razana, Iray Foko, Natambatry ny fanambadiana, mpifati-dra. Ireo rehetra ireo no mitambatra dia hoe misy ra iraisana.
Fa ao amin'ny fiarahamonina, dia singa iray amaritana ny fiarahana na ny firasankinan'ny mpiaramonina iray ny fihavanana (mpihavana), mpiray tombontsoa, mpiray saranga, mpifameno.
Ary ny mamatotra ny fiarahamonina dia fahaizamiaina, ny fifanajana, ny rafitra, sy ny fomba amam-panao.
Mafy fototra ny fihavanana eo amin'ny Jiosy ohatra satria ry zareo dia afaka manaporofo fa izy tsirairay avy dia taranak'i Abrahama, ary vitany an-taratasy mihintsy ny tetiharana amin'io. Ka ry zareo na miady aza dia mbola mpihavana foana raha vao miditra ny tokotanin'ny sinagaoga iray, na raha vao misy razana hafa (ohatra hoe Malagasy) mitady na manimba an-dry zareo.
Izahay Malagasy anefa milaza hoe havanay daholo ny Malagasy (aleo mihomehy aloha), fa fanambadiana tsy raikitra aza lasa lolom-po mandra-maty. Fiangonana iray miady an-trano dia mamorina fiangonana vaovao dia manangana pasitera izay olona nitari-tolona, dia manana anaram-piangonana vaovao e.
Nisy mpivarotra mofo akondro iray. Nandeha be ny varotra nataony. Nahita an'io ny mpifanolobodirindrina taminy dia nanagana trano kely teo akaiky ihany koa nivarotra mofo akondro. Dia lasa tsy mifampiteny intsony, misy izay mifanondraka rano amin'ny pao mihintsy amin'ny alina amin'izay lasa mamofona ny fivarotan'ny iray rehefa maraina.
rhaj0 - 13/10/2016 20:45
le même Aina, le flux vital hérité des ancêtres qui (se) transmet...
endriny inona ireo fototra ifotoran'ny fihavanana: Iray razana, Iray Foko, Natambatry ny fanambadiana, mpifati-dra. Ireo rehetra ireo no mitambatra dia hoe misy ra iraisana.
Ka mitovy ireo lazainareo ireo, raha ny fahazoako azy.
Ary taloha na fahiny na miaraka @ grassroot, dia nipetraka io teo anivon'ny fiaraha-monina, raha ny fahatakarako azy ihany ho'a. Ka ilay iray vohitra dia mahatsapa koa fa "iray Aina", na izany, "iray rà".
Fa ankehitrio moa, noho ny antony maro, dia tsy dia hita intsony, tsy dia tsapa intsony io "iray Aina, iray rà" io. Satria...
- efa niitatra ny vohitra, niitatra ny fahalalana, nitombo ny filàna, ...
- ary indrindrindra, efa nokosehan'ny fanjanahan-tany na fanjanahan-tsaina (sy ny kristianisma) ilay fi(s)ainana taloha
Tsy dia hita, tsy dia tsapa ho'a ilay "iray Aina, iray rà", na ilay "Fihavanana", fa mbola hita sy tsapa ihany kosa ho'a indraidray, indrindra ho'a any @ grassroot.. na any ambanivohitra ireny.
Izay aloha ny fahatakarako sy fahatsapako azy...
endriny - 14/10/2016 07:32
Firaisan-kina sy fandrimbona dia midika hoe fihavanana e? Iza no milaza fa mihavana ary mandala ny fihavanana ny olona miray hina manongam-panjakana ohatra? Mitovy tanjona fotsiny izy dia miaraka fa tsy hoe noho ny fihavanana. Fa rehefa vita ny tanjony dia izy samy izy indray no mifandramatra...
endriny - 14/10/2016 07:33
Mitady ho very lakolosy koa isika izany a
rhaj0 - 14/10/2016 14:07
endriny Mitovy tanjona fotsiny izy dia miaraka fa tsy hoe noho ny fihavanana
(mety) marina ny an'i Endriny. Indrindra moa rahefa ireo mpanao coup d'état no raisina ho ohatra. Dia ilay "tanjona" manetsika an-dreo dia tena "intérêt personnel" na "intérêt égoiste" be akoriny aza, fa tsisy an'izany "intérêt collectif" izany.
Fa hotry ny "idéaliser"-ko loatra angamba ho'a ny Malagasy, na koa, ireo mponina (peuple) izay TSY roboka @ ilay revy tandrefana, dia ny kristianisma niitatra @ "intérêt égoiste" eee... (ny kristiana sy ny obsession-ny @ izao fiainana mandrakizay ho an'ny tenabe-ny izao)
Nefa ve... ny manetsika ny olona ve dia (tena) "intérêt personnel" (foana) fa TSY "intérêt collectif"??
1- ilay mihetsika noho ny "intérêt personnel" rahefa jerena amina solomaso 2016 aloha dia marina loatra raha vao halalinina izay seho rehetra eo
2- ilay mihetsika noho ny "intérêt collectif" anefa... eritrereto tsara anie, fa ny "collectif" dia (mety) raisin'ny olona (gasy sy grassroot) ho "personnel" eeee.... Dia tsy izay ve ilay antsoina hoe.. "fihavanana"
endriny - 18/10/2016 07:39
MIsy ny fanontaniana matetika hoe: "Ahoana aza ny olona no mifamonjy rehefa misy fahavoazana?"
Saingy tsy ny olona irery, asa isika raha efa nahita akoho nitarika teo akaikin'ny arabe ka sendra voatsidihin'ny fiara nandalo ny zanak'akoho iray. Ny reniakoho sy ireo zanany sisa velona aloha mihaodihaody eo roa na telo minitra ary manampy mihintsy ilay fatin'akohokely hitsangana mihintsy aza ny sasany, sao mba mety ho afak mamindra ihany io. Raha misy akoho tafandalo tampoka eo, dia ohatran'ny miondrika kely koa mandinika ilay faty.
Ka raha ny akoho aza toa izany, dia ny olona indray no ahoana.
Eo izany dia ilay alahelo no mitondra ny olona hiaraka (miombon'alahelo hoy ny fomba fiteny izay), eo koa ny fiarahamonina sy ny fomba ary ny fahalalam-pomba, moa samy te hiady amin'ny fahafatesana daholo. Dia eo mody miaraka daholo na ny mpifahavalo aza, fa raha vao lasa ny razana, dia raikitra indray: Tairo izay tairina...
rhaj0 - 18/10/2016 21:32
endriny "Ahoana aza ny olona no mifamonjy rehefa misy fahavoazana?"
Marina tokoany izany. Na aty @ tany materialista/individualista/consumerista be azany, dia rahefa misy voa, dia .... misy ihany aloha no "mijery fotsiny", na faly "maka sary sy selfie", fa misy koa ny tonga dia "mamonjy".
Fanefa kosa ho'a, @ Malagasy, araky ny tatitr'i Flacourt, dia tena "normal" sy "natioraly" be mihintsy ny tonga dia mifampizara sy mifampitsinjo na mifamonjy foana, indrindra moa raha misy "fahavoazana", hoe noana na lenan'ny orana ohatra.
Dia torak'izany koa ny Amerindiana: TSISY voan'ny "fahavoazana" izany ao @ fiaraha-monina ka dia hoe ho jerem-potsiny. Vaky fanahy mihintsy ilay Amerindiana namangy tany Eoropa t@ fotoan'androny, raha nahita ireo mahantra noana sy maloto eo ambavahady volamenan'ny Mpanjaka sy izay tany Vatican any ohatra.
Ka io "fifamonjena" aty @ sosaity (nozanahin'ny) tandrefana izao ve, sao dia tonga @ ilay hira hoe:
Hay ve ka nisy, ilay farasisan'ilay hoe "iray Aina - iray rà"?
endriny - 19/10/2016 07:37
Ka FOMBA FANAJAN'ny Malagasy vahiny mihintsy kosa ange ny hoe: "omena aloha ny vahiny, ary tolorana ny tsara, fa ny tompotanana eo an-toerana afa miandry". Dia nisy fiatraikany ratsy io taty aoriana satria ireo misionera nihinana kisoa no naka rano teny amin'ny loharano fatsaka, izay misy ny rano tsara teo atsimon'ny rova teo Amparihy. Ka lasa ny olona nandeha natsaka tao ambanin'Ambatomboridamba noho izy ireo fady kisoa. Ny rano tao anefa dia tsikan-dranovato avy amin'ny Tanana eny ambony. Ka lasa raikitra teo ny hoe "tompon-tanana matsaka rano maloto".
Dia mbola misy io hatramin'izao, fa raha mampivavaka eny amin'ireny distrika eny ambanivohitra ireny ry mopera dia tsy maintsy itadiavan'ny mpivavaka akoho sy ronono ilaofana, kanefa ny tantsaha amin'io zara raha mahita hena ny 26 Jiona sy ny Krismasy. Dia tsy maintsy aloha koa ny vidin-dasantsin'i Mopera sy Pasitera, raha tsy izany izy tsy miverina mampivavaka eo intsony fa ilay katekista no irahiny eo amin'ny manaraka...
Firaisan-kina daholo izany
rhaj0 - 19/10/2016 17:15
Ilay fahatsoram-pon'ny olona na vahoaka (peuple) tia .. "fihavanana" anie dia efa fantatra sy hay fa noararaotin'ny tandrefana sy ny fivavahana Kristiana foana eee...
Tsy ny gasy ihany no voan'io fa ry Amerindiana ho'a ohatra dia tena minainaina mihintsy. T@ 1621 hono ny Amerindiana nankalaza (sy nanasa) ny Fotsy Kristiana ny @ Thanksgiving. Kalibe io an... Nefa dia efa fantatra sy hay ny nataon-dry Fotsy Kristiana taty aoriana tamin-dreo Amerindiana ireo ihany.
Tsy vaovao io ary tsisy mahagaga izany eee.... Nahabolangina an-drizareo, dia mbola tohizany h@ izao, fa "fomba (kristiana) tsisy maharatsy azy".
Dia... ho latsaina ve zareo voany ireo, hoe, izany rehefa te-ho tso-po @ Fotsy Kristiana ao, dia izay no alehany...
endriny - 20/10/2016 09:17
Io fanambakana ny tompotany amin'ny fangalarana ny fombany fo fitaovam-pisolokiana io dia tsy ahafitra akory fa efa ho tonga ny farany. Efa manomboka very ny lakolosy
endriny - 20/10/2016 15:45
Dia hitantsika amin'ny resaky ry RBNIR ery ambadika ery izany hoe: "Faly hono izy rehefa avy handringana anay ny anjeliny".
O rey olona e, mahafaly anao kristianina ny famonoana ny tsy mitovy firehana aminao. Sa moa tena izay mihintsy ilay toetr'Atra tany Israely tany ma tsy maintsy averina foana.
Aody Ranomombe, aiza ianao hitafy anay masobetsimahita sy odiantsy mba tsy ho fatin'ireto fahavalo ireto.
endriny - 21/10/2016 05:40
Vao namorona ny tany Andriamanitra dia izao no nolazainy tamin'i Eva...« Ary hoy koa Izy tamin-dravehivavy: Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan'anaka ianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran'ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao. » (Genesisy 3:16)
Izao izany no santionany amin'ny hoe Atra be fitiavana. Mahafaly azy ny vehivavy mijaly
rhaj0 - 21/10/2016 19:31
RBNIR Vao namorona ny tany Andriamanitra dia izao no nolazainy tamin'i Eva...« Ary hoy koa Izy tamin-dravehivavy: Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan'anaka ianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran'ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao. » (Genesisy 3:16)
endriny Izao izany no santionany amin'ny hoe Atra be fitiavana. Mahafaly azy ny vehivavy mijaly
Io ho'a efa hoe vasoka be izay mbola m(amp)inomino foana an'izany, fa izao efa misy ny peridurale, ary dia TSISY intsony izany "fahoriana" rahefa eo am-piterahana izany eee...
FA tsy azoko tsara ilay dikan-teny gasy ilay tapany faharoa, ka dia nozahaviko ny orijinaly anglisy sy frantsay, ngo dia i Andrianaivoravelona no nidegany eo io :
"tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. "
mouah ha ha... Dia izany ve ry RBNIR no atao fiki-maty ao?? Izany rediredin'ny olon'ny moyen-orient t@ taona -3000 izany??? Ny taonanao ity efa mandroso??
Dia tsy hitanao ve fa dia tena ny fara-faikany @ izay samy misogyne no manao resaka toa izany???
endriny - 25/10/2016 07:00
Taloha izany tsy maintsy manao firaisana vao manana zaza, fa izao afaka amboarina tsy misy firaisana ny zaza.
Dia koditra indray ny kristianina hoe: tsy manaraka ny foto-pisainana maha olona izany (etic). Dia hoy aho hoe fa angaha moa tsy ilay fihinanana ny voankazo voarara mialoha ny fotoana no nahafaty ny olona tany amin'ny sahan'i edena.
Ka raha voaverintsika tsy ilana voankazo ary ny fiterahana, dia inona no olon'ny kristianina amin'izany? Sa matahotra ry mopera fa ry masera mety hamorona zaza ho azy manokana ao rehefa mba lonadonaka iny ny vatany?
Mihomehy kely aloha...